Waxa laga filayo shirkadda SEO waxaan rabaa in aan shaqaaleysiiyo?
Mararka qaar ganacsade kasta oo ganacsade ah ayaa laga yaabaa inuu uun dareemo caajis ah horumarkaas, iyo wajihi baahida loo qabo horumarin ballaaran ee muuqaalka internetka si uu u galo macaamiisha uqalma. Haa, adoo adeegsanaya Istaraatiijiga Muuqaalka Raadinta Mashruuca ah ee isku-dhafan wuxuu noqon karaa xalka ugu wanaagsan ee lagu dhigi karo mashruuca ganacsiga ee habka saxda ah, ka dib markii milkiilaha ganacsigu horey u haysto waxyaabo badan oo la sameeyo, iyo waxyaabo badan oo laga walwalsan yahay. Sidaa darteed, tagitaanka si aad u hesho qandaraaslaha ayaa u muuqata fikrad fiican.
Laakiin waxa laga filayo shirkadda SEO waxaan mar horeba go'aan ku gaadhay inay shaqaaleysiiyaan, tusaale ahaan muraayad wax ku ool ah. Aan la kulanno - dhamaantood, sida malaha adeeg bixiyeyaasha kale, waxay kuu xaqiijin doonaan inay ka go'an tahay guushooda ganacsigaaga, waxay kuu sheegaan magacooda sumcad leh, khibrad sare iyo faham qoto dheer oo kasta, xitaa dhibta, muuqaalka Mashruuca Raadinta Wax-ka-qabashada sida farsamada casriga ah lafteeda, suuq-geynta internetka, horumarinta webka, naqshad wax ku ool ah, istaraatiijiyad content, warbaahinta bulshada, iyo wixii la mid ah. Laakiin waxa aan ka filan karno shirkadda SEO, oo u ballanqaaday in ay samaysay dhammaan waxyaabahaan si wanaagsan, oo ay ku jirto qiimo macquul ah?
Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah talooyin ku saabsan waxyaabaha aan mar walba ka filan karno shirkadda SEO kadib markaad ka go'an tahay inaad shaqaaleysid. Sidaa darteed, tixgeli kuwan soo socda si aad u sameyso heshiis iyo hoos u dhac ganacsi.
Kulanka hordhaca ah
Markaad xulato shirkadda SEO si aad uga shaqeyso mashruucaaga, waxaad dooneysaa kulan furan. Waxay noqon kartaa shir khaas ah oo ka dhacda hoolka shirarka, wada hadal telefoon, ama falanqayn kooban oo ku saabsan fiidiyowga. Si kastaba, waxaa jira su'aalo muhiim ah oo ay tahay in laga jawaabo ka hor inta aadan ugu dambeyn saxiixin qandaraas. Oo waxay u fiicnaan lahayd inaad diyaariso liiska su'aalaha horey u sii wadi. Waxaan kugula talin doonaa inaan ka bilowno qodobada soo socda:.
Weydiiso tixraacyo gaar ah ama daraasad kees si aad u eegto oo aad uga fikirtid wakhti dambe. Waxaan u jeedaa halkan goob-bixiyeyaasha ku-meel-gaadhka ah ee khibradda leh ee ku haboon waa in ay had iyo jeer diyaar u yihiin inay ku tusaan qaar ka mid ah hababka gaarka ah ee gaarka ah ama shaqsiyaadka shaqsiyaadka si istaraatijiyad gaar ah ee SEO.
Codso qiyaasta waqtiga ee ganacsigaaga si aad u dareento calaamadaha koowaad ee horumarka dhabta ah. Ogsoonow, waa inaad aad u taxaddartaa oo xitaa laga shakiyo. Shirkadda SEO waa inay ku siisaa wakhti macquul ah oo qaabaysan, sida ku cad natiijooyinkeedii hore. Waa inaan marna kuu ballan qaadin wax horumar ah maalmo ama toddobaadyo.
Samee wax walba oo cad mar labaad, ha ka baqin inaad ku celiso su'aalahaaga inta ay le'eg yihiin kooxdii ugu muhiimsanaa ee khubarada ah ee ka shaqeynayay warshadaha. Sidoo kale, weydiiso haddii ay jirto khibrad hore ee mawduucaaga ama ugu yaraan ku haboon suuqa.
La soco haddii shirkada SEO ay diirada saarto qaybo gaar ah oo ka mid ah Search Engine Optimization, ama waxay ka shaqayn kartaa suuq-geynta dijital ah si ballaadhan. Sidaa samee, weydii inta khabiirada suuq-geynta suuq-geynta ay ka shaqayn doonaan mashruucaaga.
U hubso inaad timaado kulan hordhac ah oo liiska weedhahan oo kale ah si aad u tixgelisid oo aad wax kasta u dhammaystirtid. Inaad xor u noqotid in aad cadeyso dhamaan guud ahaan, iyo sidoo kale doodaha muhiimka ah ee horey kuu siiyay maamulayaasha iibka. Kaliya isbarbardhiga kuwa dhabta ah oo kaliya ay u cadeeyeen wakiillada shirkadaha SEO. Xaqiiqdii, wax badan ayaa noqon kara mid aan caadi aheyn, sidaas darteed waxa fiican inaad haysatid labajibbaar si aad u dareento inaad hubto.
Markaad wada-hadalladaaga la socoto wakiillada waa la soo gabagabeynayaa, waa in aadan dareemaynin xataa xitaa hawada ugu fudud ee niyadjabka ah, gaar ahaan maadooyinka muhiimka ah sida wareegyada biilasha, waqtiga go'an, iyo istaraatiijiyada guud ee baaritaanka Hagaajinta.
Xisaabinta bilowga ah ee SEO
Waxyaabaha ugu horreeya ee ay sameeyaan shirkadda SEO ayaa ku shaqeynaya Hanti-Dhowrka bilowga boggaaga. Inta badan, geeddi-socodka waxaa lagu barbardhigi karaa iyada oo la ogaanayo xaaladaha caafimaadka ee SEO-gaaga oo dhan laga qaaday midkiiba.
Marka laga reebo kartida tayada iyo heerarka waayo-aragnimada hay'adda, wareegga wareegidda ee Baaritaanka SEO waxaa guud ahaan lagu go'aamiyaa dhibtaada goobta, iyo sidoo kale cabbirka iyo xaddiga bogaggaaga. Markaad tixgelinayso Hanti Dhowrka Hore, waa inaad ka fili kartaa shirkadda SEO arrimaha soo socda:
Waxaa lagaa codsan doonaa inaad bixiso koontada Google Analytics. Isticmaalida qalabka xirfadaha kala duwan iyo qaababka saxda ah khubarada ayaa u baahan doona helitaanka kooban ee dashboardka iyo warbixinnada bogga.
Shirkadda SEO waxay u badan tahay inay codsato faahfaahinta xiriirka qof ka tirsan kooxdaada, kuwaas oo masuul ka noqon doona SEO si toos ah u maamulaan xisaabtaada. Fiiro gaar ah, dhexdhexaadintu waa wada sheekeysigan, ka sii wanaagsan. Waxaan ula jeedaa inaad si fiican uga heshiinayso inaad haysato wicitaanada shirarka ah waxqabadyo muhiim ah, halkii ay wadaagaan iskudhafka sheyga ee soo jeedinta. Shirkadda SEO waa inaan marnaba ku siinin wax la mid ah "MAYA Liiska", sida Bixiyeha wax-ku-oolka ah oo lagu kalsoonaan karo oo lagu kalsoonaan karo waxay ka dhigan tahay isgaadhsiin joogto ah, baaritaan, iyo doodo dheeraad ah oo ku saabsan natiijooyinka muhiimka ah. Sidaa oo kale, marwalba waad ogaan doontaa sida wanaagsan ee ay u socdaan, maxaa yeelay wadashaqeyntu waa inay weli tahay mid cad oo cad.
Waa inaad filaysaa in shirkadda SEO ay ku siin doonto maamulaha koontada shakhsi ahaaneed si ay kuu ilaaliyaan dhacdo kasta oo khaldan ama shaki ku jiro markay dhacaan muddada buuxda ee qandaraaskaaga. Qaabkaas, kooxdu waxay awood u yeelan doontaa inay ka shaqeyso dhibaatooyinka iyo hagaajinta wixii wadajir ah.
Waxaad ogaan doontaa inaad sameysay doorasho sax ah ogeysiis gaaban. Maalin kasta maamulayaasha waa inay diyaar u yihiin oo ay diyaar u yihiin inay ku siiyaan dood cad oo ku saabsan istaraatijiyad kasta iyo qorsheyaal hore u lug leh, ama kaliya loo tixgeliyo raadinta boggaaga internetka. Habkaas, waxaad dareemi doontaa wadahadalka socda iyo taageerada si buuxda uga go'an barwaaqadaada. Shirkadda SEO waa inay qaadaan miisaan ballaaran oo SEO ah oo ka baxsan garbahaaga si aad u noqoto mid bilaash ah in lagu xiro arrimaha ganacsiga muhiimka ah, kuwaas oo had iyo jeer sugitaanka dareenka dhabta ah ee milkiilaha Source .